Mmemme & Ọrụ – BullyingCanada
Mmemme & Ọrụ
/ Mmemme & Ọrụ
Usoro ndụ: Netwọk Nkwado Mba
BullyingCanada kere ụbọchị 365 kwa afọ, awa 24 kwa ụbọchị, netwọk nkwado ụbọchị 7 n'izu nke na-enye enyemaka mgbanwe ndụ ndị ntorobịa site na ekwentị, nkata ịntanetị, email, na ozi ederede.
Ọrụ nkwado a enweghị atụ na Canada - na-aga karịa ndụmọdụ ndị ọrụ ebere ndị ọzọ na-amaghị aha na-enye.
Ya na otu ndị nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ afọ ofufo si n'ofe Canada na-arụ ọrụ ike n'ụlọ ha, BullyingCanada na-enye nkwado na ntinye aka iji gbochie na ịkwụsị mmegbu. A zụrụ ndị ọrụ afọ ofufo anyị ndụmọdụ, igbochi igbu onwe, mkpezi na idozi nsogbu. Ndị dike a chọpụta nsogbu na dozie ha– ịkwụsị mmegbu na igbochi nlọghachi ya.
Ha na-eme nke a site n'inwe mkparịta ụka miri emi, otu onye na ndị ntorobịa a na-emegbu na ezinụlọ ha; ndị na-akpa ike na ndị mụrụ ha; ndị nkuzi, ndị ndụmọdụ nduzi, ndị isi ụlọ akwụkwọ, na ndị ọrụ bọọdụ ụlọ akwụkwọ; ọrụ mmekọrịta obodo; na, mgbe ọ dị mkpa, ndị uwe ojii mpaghara. Ebumnobi ikpeazụ anyị bụ ịkwụsị ọnyà ụmụaka a na-emegbu enwetela, ma nweta nlekọta nlebanya na-adị mkpa mgbe niile iji gwọọ.
Dịkarị, BullyingCanada na-anọgide na-arụsi ọrụ ike ruo izu abụọ ma ọ bụ atọ, mana ọnọdụ ndị dị mgbagwoju anya achọwo nkwado ruo ọnwa ma ọ bụ otu afọ ma ọ bụ karịa iji dozie. Anyị anaghị ada mbà ruo mgbe ụmụaka a na-emegbu emegbu nọ ná nchebe ma nwee ike ịtụ anya ọdịnihu ka mma.
Ịmepụta uche mepere emepe na ichebe ụmụaka
Na mgbakwunye na inye ụlọ akwụkwọ na ọgbakọ obodo akwụkwọ mmado, broshuọ na ihe nkuzi ndị ọzọ, BullyingCanada, n'okpuru nduzi nke Rob Benn-Frenette, ONB, na-enyekwa ogbako maka otu dị iche iche nha.
Ọgbakọ ndị a na-enyere ndị ntorobịa na ndị isi obodo aka ịlụso mmegbu ọgụ nke ọma na inye ha ụzọ ọhụrụ maka idozi nsogbu ndị ha na-eche ihu n'oge ndụ ha niile.
Mmemme Ọzụzụ Mba
Inye ndị isi ntorobịa ike
Emebere mmemme mmụta mba na 2013 iji nyeghachi ndị ntorobịa, yana ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ họpụtara ndị nwere ike ịnata ya. BullyingCanada ghọtara mkpa ọ dị ịzụlite ndị isi obodo na-anụ ọkụ n'obi, ma mepụtakwa usoro mmụta mmụta nke mba iji nye onyinye mmụta ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Agụmakwụkwọ ndị a na-enyere ndị ntorobịa aka ịghọ ndị isi obodo na-ekwu okwu ike n'ụlọ akwụkwọ.
Enweghị Nwa Ahapụ
Ebe ọ bụ na 2006, BullyingCanada abụrụla nke mba go-to nhazi mgbe ọ na-abịa na mbọ mgbochi mmegbu. N'ezie, anyị ka bụ naanị ọgbakọ ọrụ ebere mba nke na-eso ndị ntorobịa Canada, ezinụlọ ha, na obodo ha na-arụkọ ọrụ, na-enye nkwado, akụrụngwa na ozi dị ogologo oge iji gbochie ime ihe ike ma chekwaa ụmụ anyị.
Anyị na-anya isi n'inye ụmụaka ndị na-adịghị ike emegbu nkwado ha chọrọ, gbasaa mmemme anyị iji gbochie ime ihe ike na hụ na nchekwa ụmụ anyị.
BullyingCanada na-agbasi mbọ ike ịkwado n'aha ndị ntorobịa a na-emegbu emegbu n'ofe mba ahụ - na-ewulite ọdịnihu na-egbuke egbuke maka ndị ntorobịa a na-emegbu na obodo ha.
Kedu ihe bụ mmegbu?
Gịnị ka a pụrụ ime?
Ọtụtụ ụmụaka nwere ezi echiche banyere ihe mmegbu bụ n'ihi na ha na-ahụ ya kwa ụbọchị! Iji ike emegbu mmadụ na-eme mgbe mmadụ kpasuru onye ọzọ iwe ma ọ bụ mee ka ụjọ jide onye ọzọ na ebumnobi ya na ọ na-esiri onye a na-amaja ike ịgbachitere onwe ya. Yabụ, onye ọ bụla kwesịrị itinye aka iji nyere aka kwụsị ya.
Iji ike emegbu mmadụ adịghị mma! Ọ bụ omume na-eme ka ụjọ jide onye a na-amaja ma ọ bụ ahụ erughị ala. E nwere ọtụtụ ụzọ ndị na-eto eto si akparị ibe ha, ọ bụrụgodị na ha amataghị ya n’oge ahụ.
Offọdụ n'ime ha gụnyere:
Ịkụ ọkpọ, ịkwa ihe na ihe ndị ọzọ na-emerụ mmadụ ahụ́
Ịgbasa akụkọ ọjọọ banyere ndị mmadụ
Idobe ụfọdụ ndị mmadụ n'ìgwè
Na-akparị ndị mmadụ n'ụzọ ọjọọ
Ime ka ụfọdụ ndị 'na-agbakọta' ndị ọzọ
Kedu ụdị mmegbu a na-ahụkarị?
Mkparị ọnụ ọnụ - ịkpọ aha, njakịrị, njakịrị, ịgbasa asịrị, iyi egwu, ikwu okwu ọjọọ na omenala mmadụ, agbụrụ, agbụrụ, okpukperechi, okike, ma ọ bụ usoro mmekọahụ, okwu mmekọahụ na-achọghị.
Iji ike emegbu mmadụ - mkparị, ịkwa emo, ewepu ndị ọzọ na otu, iweda ndị ọzọ anya site na mmegharị ọha ma ọ bụ ihe odide e bu n'obi ịkwatu ndị ọzọ.
Iji ike emegbu mmadụ - ịkụ aka, ịkụ ọkpọ, ịkụ aka, ịchụ, ịkwanye, ịmanye, ibibi ma ọ bụ izu ohi, mmetụ mmekọahụ achọghị.
Cyber ​​Iji ike emegbu mmadụ - iji ịntanetị ma ọ bụ ozi ederede na-atụ egwu, weda, gbasaa asịrị ma ọ bụ mee mmadụ ihe ọchị.
Kedu ihe ụfọdụ n'ime ihe ndị na-akpata mmegbu?
Iji ike emegbu mmadụ na-ewe iwe. O nwere ike ime ka owu na-ama ụmụaka, enweghị obi ụtọ na egwu. O nwere ike ime ka ha chee na enweghị nchebe ma chee na ọ ga-abụrịrị ihe na-adịghị mma na ha. Ụmụaka nwere ike ịkwụsị inwe obi ike ma nwee ike ha agaghị achọ ịga ụlọ akwụkwọ ọzọ. O nwedịrị ike ime ka ha rịa ọrịa.
Ụfọdụ ndị na-eche na mmegbu bụ nanị akụkụ nke ntolite na ụzọ ndị na-eto eto ga-esi mụta ijigide onwe ha. Ma iji ike emegbu mmadụ nwere ike ịkpata nsonaazụ anụ ahụ na nke uche na-adịte aka. Ụfọdụ n'ime ndị a gụnyere:
Ịla azụ na ihe omume ezinụlọ na ụlọ akwụkwọ, na-achọ ka ahapụ ya.
Enweghị ike ihi ụra
Ịra ụra nke ukwuu
Ọ bụrụ na akwụsịghị iji ike emegbu mmadụ, ọ na-ewutekwa ndị na-ekiri ya, nakwa onye na-emegbu ndị ọzọ. Ndị nọ n'akụkụ na-atụ egwu na ha nwere ike ịbụ onye ọzọ a ga-emekpa ahụ. Ọ bụrụgodị na obi adịghị ha mma n’ebe onye a na-emegbu nọ, ha na-ezere itinye aka n’ihe iji chebe onwe ha ma ọ bụ n’ihi na ha amaghị ihe ha ga-eme.
Ụmụaka ndị mụtara na ha nwere ike ime ihe ike na ime ihe ike na-aga n'ihu na-eme otú ahụ mgbe ha toro. Ha nwere ohere dị elu nke itinye aka na mmegide nwoke na nwanyị, iyi egwu mmekọahụ, na omume mpụ mgbe e mesịrị.
Iji ike emegbu mmadụ nwere ike imetụta mmụta
Nchegbu na nchekasị nke mmegbu na iyi egwu kpatara nwere ike ime ka ọ siere ụmụaka ike ịmụta. Ọ nwere ike ịkpata ihe isi ike na itinye uche ma belata ikike itinye uche ha, nke na-emetụta ikike icheta ihe ndị ha mụtara.
Iji ike emegbu mmadụ nwere ike ịkpata nchegbu ka njọ
Iji ike emegbu mmadụ na-egbu mgbu na ihere, na ụmụaka ndị a na-emegbu na-enwe ihere, na-eti ihe na ihere. Ọ bụrụ na a kwụsịghị ihe mgbu ahụ, mmegbu nwere ike ime ka a tụlee igbu onwe ya ma ọ bụ omume ime ihe ike.
Olee otú iji ike emegbu mmadụ si emekarị?
Na Canada, ọ dịkarịa ala, 1 n'ime ụmụ akwụkwọ atọ na-eto eto akọwo na a na-emegbu ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị nne na nna Canada akọwo na ha nwere nwa a na-emegbu. Nnyocha achọpụtala na mmegbu na-eme otu ugboro kwa nkeji asaa n'ọgbọ egwuregwu na otu ugboro kwa nkeji iri abụọ na ise na klaasị.
N'ọtụtụ ọnọdụ, iji ike emegbu mmadụ na-akwụsị n'ime sekọnd 10 mgbe ndị ọgbọ tinyere aka, ma ọ bụ akwadoghị omume mmegbu ahụ.
Kedu ihe m ga-eme ugbu a gbasara mmegbu n'obodo m?
Nke mbụ, cheta na anyị nọ ebe a maka gị 24/7/365. Soro anyị kpakọrịta ndụ, zitere anyị ozi email, ma ọ bụ nye anyị mgbanaka na 1-877-352-4497.
Nke ahụ kwuru, ebe a bụ ihe omume ole na ole ị nwere ike ime:
Maka Ndị Ihe Metara
Gwa onye ị tụkwasịrị obi - onye nkuzi, onye nchịkwa, onye ndụmọdụ nduzi, nne na nna
Rịọ maka enyemaka
Gwa onye na-emegbu mmadụ ihe ga-eme ka ọ dọpụ uche ya
Nọrọ n'ìgwè ka ịzenarị ọgụ
Jiri ọchị tufuo ma ọ bụ jikọọ gị na onye mmegbu gị
Mee ka à ga-asị na onye na-emegbu gị adịghị emetụta gị
Nọgide na-echetara onwe gị na ị bụ ezigbo mmadụ nakwa na i kwesịrị ịkwanyere ùgwù
Maka ndị ọbịa:
Kama ileghara ihe omume mmegbu anya, nwaa:
Gwa onye nkuzi, onye nkuzi ma ọ bụ onye ndụmọdụ
Gagharịa n'akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ onye ihe metụtara
Jiri olu gị - kwuo "kwụsị"
Mee enyi onye ihe ahụ metụtara
Duru onye a tara ahụhụ pụọ n'ọnọdụ ahụ
Maka ndị na-emegbu mmadụ:
Gwa onye nkụzi ma ọ bụ onye ndụmọdụ
Chee echiche otú ọ ga-adị gị ma mmadụ na-akparị gị
Tụlee mmetụta onye ị na-enwe - chee echiche tupu i mee ihe
Kedu ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa ịmara gbasara mmegbu?
Canada nwere ọnụ ọgụgụ mmegbu nke 9 kachasị elu na ngalaba ndị dị afọ 13 n'oke mba 35. 
Ọ dịkarịa ala, 1 n'ime ụmụ akwụkwọ atọ na-eto eto na Canada akọwo na a na-emegbu ha n'oge na-adịbeghị anya. 
N'ime ndị Canada toro eto, 38% nke ụmụ nwoke na 30% nke ụmụ nwanyị kọrọ na ha enwetala mmegbu oge ụfọdụ ma ọ bụ ugboro ugboro n'oge afọ akwụkwọ ha. 
47% nke ndị nne na nna Canada na-akọ na ha nwere nwatakịrị a na-emegbu. 
Ntinye ọ bụla na mmegbu na-abawanye ohere nke echiche igbu onwe onye n'oge ntorobịa. 
Ọnụego ịkpa oke a na-enweta n'etiti ụmụ akwụkwọ ndị na-akọwa dị ka Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-identified, Two-Spirited, Queer or Questioning (LGBTQ) ji okpukpu atọ karịa ndị ntorobịa nwoke na nwoke. 
O yikarịrị ka a na-emegbu ụmụ agbọghọ na ịntanetị karịa ụmụ nwoke. 
7% nke ndị ọrụ ịntanetị toro eto na Canada, ndị dị afọ 18 na karịa, akọwara onwe ha na ha bụ ndị a na-emegbu cyber n'oge ụfọdụ na ndụ ha. 
Ụdị mmegbu nke ịntanetị na-emekarị gụnyere ịnata ozi-e-egwu egwu ma ọ bụ ike ike ma ọ bụ ozi ozugbo, nke 73% nke ndị ọ metụtara kwuru. 
40% nke ndị ọrụ Canada na-enweta mmegbu kwa izu. 
Canadian Council on Learning – Iji ike emegbu mmadụ na Canada: Otu iyi egwu si emetụta mmụta
Molcho M., Craig W., Due P., Pickett W., Harel-fisch Y., Overpeck, M., na HBSC Ịgbugbu Writing Group. Usoro oge gafee mba na omume mmegbu 1994-2006: nchoputa sitere na Europe na North America. Akwụkwọ akụkọ mba ụwa nke ahụike ọha. 2009, 54 (S2): 225-234
Kim YS, na leventhal B. Iji ike emegbu mmadụ na igbu onwe ya. Nlebanya. Akwụkwọ akụkọ mba ụwa nke ọgwụ na ahụike na-eto eto. 2008, 20 (2): 133-154
Alberta na-emegbu onwe ya - Mmegbu nwoke idina nwoke
Statistics Canada – Cyber-iji ike emegbu mmadụ na ịrata ụmụaka na ndị ntorobịa
Statistics Canada - Mkpesa ịntanetị n'onwe ya na Canada
Lee RT, na Brotheridge CM "Mgbe anụ oriri na-aghọ anụ: Mmegbu n'ebe ọrụ dị ka amụma nke mmegide / mmegbu, ịnagide na ọdịmma". Akwụkwọ akụkọ European nke Ọrụ na Psychology nhazi. 2006, 00 (0): 1-26
Olee ụfọdụ akụkọ ifo ndị a na-akọkarị banyere imegbu mmadụ?
Echiche Ụgha #1 - "Ụmụaka aghaghị ịmụta ịkwado onwe ha."
Eziokwu - Ụmụaka ndị na-enwe obi ike na-eme mkpesa na a na-emegbu ha na-ekwu na ha anwalela na ha enweghị ike ịnagide ọnọdụ ahụ n'onwe ha. Were mkpesa ha dị ka oku maka enyemaka. Na mgbakwunye na inye nkwado, ọ nwere ike inye aka inye ụmụaka nkuzi idozi nsogbu na nkuzi iji nyere ha aka n'ịnagide ọnọdụ siri ike.
Echiche Ụgha #2 - "Ụmụaka kwesịrị ịkụ azụ azụ - naanị ike."
Eziokwu - Nke a nwere ike ịkpata nnukwu mmerụ ahụ. Ndị na-emegbu mmadụ na-enwekarị nnukwu ike karịa ndị a na-emegbu ha. Nke a na-enyekwa ụmụaka echiche na ime ihe ike bụ ụzọ ziri ezi isi dozie nsogbu. Ụmụaka na-amụta otú e si emegbu mmadụ site n'ikiri ndị okenye na-eji ike ha eme ihe ike. Ndị okenye nwere ohere isetịpụ ezi ihe nlereanya site n'ịkụziri ụmụaka otú e si edozi nsogbu site n'iji ike ha eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Echiche Ụgha #3 - "Ọ na-ewuli agwa."
Eziokwu - Ụmụaka ndị a na-emegbu ugboro ugboro, nwere obere ùgwù onwe ha ma ghara ịtụkwasị ndị ọzọ obi. Iji ike emegbu mmadụ na-emebi echiche onwe onye.
Echiche Ụgha #4 - "Mkpụrụ osisi na nkume nwere ike ịgbaji ọkpụkpụ gị mana okwu enweghị ike imerụ gị ahụ."
Eziokwu - Anya nke ịkpọ aha hapụrụ nwere ike ịdịru ogologo ndụ.
Echiche Ụgha #5 - "Nke ahụ abụghị mmegbu. Ha na-akwa emo.”
Eziokwu – Njakịrị obi ọjọọ na-ewute ya, ekwesịrị ịkwụsị ya.
Echiche Ụgha #6 - "A na-enwekarị ndị na-emegbu mmadụ, ọ ga-adịkwa mgbe niile."
Eziokwu - Site n'ịrụkọ ọrụ dịka nne na nna, ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ anyị nwere ike ịgbanwe ihe na ịmepụta ọdịnihu dị mma maka ụmụ anyị. Dị ka ọkachamara ọkachamara, Shelley Hymel, na-ekwu, "Ọ na-ewe mba dum iji gbanwee omenala". Ka anyị gbakọọ aka ka anyị gbanwee àgwà gbasara mmegbu. A sị ka e kwuwe, iji ike emegbu mmadụ abụghị okwu ịdọ aka ná ntị - ọ bụ oge nkuzi.
Echiche Ụgha #7 - "Ụmụaka ga-abụ ụmụaka."
Eziokwu – Imegbu mmadụ bụ omume mmụta. Ụmụaka nwere ike na-eṅomi omume ike ike ha hụrụ na telivishọn, na fim ma ọ bụ n'ụlọ. Nnyocha na-egosi na 93% nke egwuregwu vidiyo na-akwụghachi omume ime ihe ike. Nchọpụta ndị ọzọ gosiri na pasentị 25 nke ụmụ nwoke ndị nọ n'agbata afọ 12 ruo 17 na-agakarị ebe a na-egwu egwuregwu gore ma na-akpọ ebe ịntanetị asị, mana klas mmụta mgbasa ozi mere ka ụmụ nwoke ghara ịhụ ime ihe ike, yana omume ime ihe ike ha n'ámá egwuregwu. Ọ dị mkpa ka ndị okenye na ndị ntorobịa na-ekwurịta banyere ime ihe ike na mgbasa ozi, ka ha wee mụta otú e si edebe ya na ọnọdụ. Ọ dị mkpa ilekwasị anya n'ịgbanwe àgwà ime ihe ike.
Isi Iyi: Gọọmentị Alberta
Kedu ka m ga-esi wepụta onwe m?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na gị na ndị ọrụ afọ ofufo BullyingCanada, ị nwere ike ịmụtakwu na anyị Sonye na Bụrụ onye ọrụ afọ ofufo peeji nke.
Anyị na-achọ ndị na-anụ ọkụ n'obi, ndị nwere mkpali, na ndị raara onwe ha nye iji nyere anyị aka ịkwụsị ndị ntorobịa na-adịghị ike site na mmegbu.